एउटीसँग प्रेम बस्ला जस्तो भएको थियो, झ्याप्पै अर्कीसँग बिहेः मिलन लामा
माझीदाइ पोखरा फेवातालको
लाम् माया साँच्चैको नलाम् भो ख्याल ख्यालको
खाइलाग्दो ज्यान । हँसिलो मुहार । झट्ट हेर्दा सेनाको जस्तो हट्टा कट्टा देखिन्छन् मिलन लामा । तर उनको परिचय गायक हो । र, उनी गायक मात्र होइनन् । प्राय आफ्ना सबै गीतमा लय, शब्द, संगीत भर्ने काम पनि आफै गर्छन् । आफ्ना गीतको भिडियोमा आफैले नै अभिनय समेत गर्न भ्याउँछन् मिलन ।
उनलाई लोक गायकको परिचय बनाउन भने त्यति सजिलो थिएन । गीतमार्फत समाजका कथालाई प्रस्तुत गर्न रुचाउने लामाको परिवारको चाहना भने मिलन लाउरे भइदियोस् भन्ने थियो ।
लामा सानो हुँदा नै उनका बुवाआमाको मृत्यु भयो । तीन दाजुभाइ र चार दिदी बहिनीमध्ये सबैभन्दा कान्छा मिलनलाई परिवारले सधैभरी ‘मिलन’को आभाष दिलायो ।
बाल्यकालमै उनले निर्णायक सपना देखेका थिए । उनको सपना थियो, भविष्यमा ठूलो कलाकार बन्ने । विद्यालय तथा गाउँमा हुने हरेक कार्यक्रममा उनले गीत गाउँथे । आफैले शब्द सृजना गर्थे । स्थानीय स्तरमा आफूलाई सृजनशील बनाइसकेका थिए ।
उनी आफूलाई गीत गाएर नै केही गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो ।
कक्षा नौमा पढ्ने स्कुले समयमै बिहे भएले उनले मायाँ पिरती गास्न भने भ्याएनन् । ‘मेरो जिन्दगीमा प्रेम भन्ने नै भएन, सिधै बिहे भयो ।’ उनी त्यो बेला स्मरण गरेर लामो हाँसो हाँस्दै लोकान्तरलाई आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘एउटीसँग भर्खर भर्खर प्रेम बस्ला जस्तो भएको थियो । दाइहरुले झ्याप्पै अर्कीसँग बिहे गरिदिए ।’
बिहेपछि केही समय घरपरिवारका लागि मात्र समय दिन थाले । अब केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मा पनि परेको थियो उनलाई । त्यसैले उनले चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा एउटा सांस्कृतिक घर खोले । जहाँ धेरै मात्रामा थारु समुदायको प्रस्तुति रहन्थ्यो । पर्यटकलाई लक्षित गरी गरिएको कार्यक्रममा उनले पनि नेपालका विभिन्न समुदायका गीत प्रस्तुत गर्थे । यो व्यवसाय औसत रुपमा राम्रै चलेको थियो ।
त्यति बेला देशको राजनीतिक स्थिति राम्रो थिएन । अस्थिर राजनीतिले सबैको जीवनमा प्रभावित पारेको थियो । त्यो प्रभाव एक सामान्य नागरिकलाई पनि प¥यो, जसले गीत संगीतकै क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेको थियो ।
‘मैले एउटा हलको व्यवस्था गरेर हरेक दिन कार्यक्रम चलाउँथें । देशको राजनैतिक अस्थिरताले नेपालमा पर्यटक आउन छोडे ।’ पुराना दिन सम्झदै मिलनले भने ‘पर्यटकलाई केन्द्रित गरी थालिएको त्यो व्यवसाय घाटामा गयो । पछि मैले कर्मचारी तथा कलाकारलाई तलब दिन पनि नसक्ने स्थिति आयो ।’
व्यवसायमा घाटा व्यहोरेपछि उनी २०५८ मा काठमाडौं आए । उनलाई लोकगीतमा केही गर्नु छ भन्ने लागिरहेको थियो । त्यसैले उनले आएर ‘कृष्णभीरमा जाम्...’ नामको गीत रेकर्ड गराए । धादिङको कृष्णभीरमा गएको पहिरोले गर्दा राजधार्गमा सर्बसाधारण जनतालाई पुराएको सास्तीलाई गीत मार्फत व्यक्त गरिएको थियो । उनको यो गीत धेरैले रुचाए । रोयल्टीबाट तीन लाखभन्दा धेरै पाए । अर्को गीत ‘हङङ आइडील’े पनि त्यो बेलामा नौ लाखको दिलायो । उनी सम्झन्छन्, ‘मैले सौराहामा कल्चरल कार्यक्रम गरेर चार करोड घाटा खाएको थिएँ । पहिलो गीतले केही राहत दिलायो ।’ उनी कुराकानीलाई जोड्दै भन्छन्, ‘एक अर्थले त म चार करोड खर्च गरेर यो क्षेत्रमा आएको रहेछु ।’
‘माझीदाइ पोखरा फेवातालको...’ गीतले उनलाई आर्थिक रुपमा बलियो मात्र बनाएर देश विदेश कार्यक्रम गर्न पाउने गरी सबै श्रोतामाझ चिनायो । एकदिन पोखरामा घुम्न जाँदा यो गीत रचना भएको उनी बताउँछन् । त्यही गीन मिलन लामालाई चिनाउने ‘ब्राण्ड’ जस्तै बन्यो ।
सानो देशमा धेरै कलाकार भएको महसुस हुन्छ लामालाई । यो क्षेत्रमा आउने कलाकार धेरै भएपनि गुुणस्तर ल्याउन सक्ने कलाकार कोही नभएको उनको गुनासो छ । अहिलेका लागि विदेशमा हुने कार्यक्रम नै कलाकारको बाँच्ने आधार बनेको छ ।
अमेरिकामा मात्र चार पटक सांगीतिक कार्यक्रमका लागि गएका लामा अहिलेसम्म ३४ देश घुमिसकेको बताउँछन् । अहिले कलाकारले कमाउने बाटो भनेकै युट्युब या कार्यक्रमबाट हो भन्ने उनलाई लाग्छ । भन्छन्, – लोक संगीतका लागि राज्यले केही गर्नुपर्ने हो तर राज्यले आफ्नै बेहाल छ । कलाकारितालाई व्यवस्थित कसरी गरोस !
लामा आगामी फागुनसम्ममा जातीय सद्भाव झल्किने गीत ल्याएर बजारमा आउन लागेको बताउँछन् ।
बाहुन क्षेत्री आदिवासी दलित जनजाती
जो मरे नि धुलो भुइँमा धुवाँ आकाशमाथि
बाँचुन्जेल मिलेर बसम् न कान्छा
मरेपछि काँ जान्छ जान्छ
यो उनको अब आउन लागेको गीतको अंश हो । बजारमा आउन लागेको गीतको शब्द सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘अधिकार त सबैले पाउनुप¥यो तर सद्भाव बिगार्न भएन । मैले गीतमार्फत यही सन्देश दिन खोजेको छु ।’ पुस २३, २०७३ मा प्रकाशित
दोस्रो पुस्ताका रक्तिम गायकः जीवन शर्माकै जस्तो स्वर, झुक्किन्छन् साथीहरू
कुनैबेला कुकुर देख्दा मुन्टो बटार्ने स्नेहा एउटै घटनाले बदलिइन्
२०० वर्षसम्म कोशी बाँधको साँचो भारतको हातमा, कसरी सकून् देउवाले खोल्न !
ललितपुरका ‘म्यादी प्रहरी बा’ पाँचौं चुनाव गराउँदै !
सभागृहमा ७ घण्टा : रवीन्द्र मिश्रको उत्साहदेखि रमिलाको आक्रोशसम्म (फोटोफिचर)
समानुपातिकमा बन्द सूचीका नामहरुलाई तलमाथि गर्न नपाइने काठमाडौं, २७ मंसिर — प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दलहरुले समानुपातिक तर्फको बन्द सुचिमा राखेका उम्मेद्धवारका नामहरुलाई नै क्रमशः अनुसार नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । ब...
रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिइएन, काठमाडौं पठाइयो
हार्नेको घरमा जब जित्ने पुगे ....
संसदमा ९ दलको उपस्थिती पक्का, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति ?
नेपाली स्मार्ट फोन बजारमा आइभुमी मोबाइल
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेनन, सात दिनभित्र नबुझाए कारवाही